Tonga androany ny Air Force One Vaovao | news2dago |
Tonga Androany Ny Air Force One Vaovao
news2dago 05 Janoary, 2009 07:10 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Dia io izany aloha ny vaovao lehibe misongadina akaotran'ilay fonja vaky teny Tsiafahy izay nisy gadra 22 tafatsoaka ary ny 16 t@ izy ireo dia mbola miriria any h@ izao. Nafonja tokoa ny fisavana ny fiara nivezivezy tany @ iny lalam-pirenena faha 7 iny omaly tontolo ary ireo lehilahy tsy manana karatra dia voatazona avy hatrany atao fanadihadina.
Fa hiverina @ ilay lohateny @ izay aho izay tsy maintsy asina resabe foana aloha satria iarahana mahalala ny fahasahiranana mianjady @ vahoaka ankehitriny kanefa ireo lehibe toa te hifaninana @ ireo mpitondra any @ firenene mandroso sasany. Voalaza tokoa mantsy ho avy androany ilay Air Force One "II" izay azo lazaina fa arifomba tokoa no tena ngeza no malalaka misy fandriana misy salon misy bar sy ireo rehetra mety ho hita ao @ tranon'ny mpanakarena angaha no hamehezana azy. Dia tsy maintsy oe ho voatety ihany izao tontolo izao e!!! Ny aina no mateza hoy ny fitenenana. Misy farany anefa ny zavatra rehetra ary fandalovana ihany ny toerana maha prezida izany ka na ho ela na ho haingana dia tsy maintsy hifarana ny fiadanam-be hananany @ izao io.
Etsy andaniny kosa dia naharay fiarabana tratry ny taona tany @ ben'ny tanana ny fiangonana tao @ nay omaly ary novakiana tao @ filazan-draharaha mihitsy izany. Asa aloha ny an'ny fiangonana hafa fa izay hitako no ambarako eto. Miandry ilay daty farany nomen'Ingahy ben'ny tanana tokoa ny rehetra dia ny 13 janoary izany. Efa nampitadrina anefa ny filoha fa tsy maintsy miatra ny lalàna fa tsy misy ambonin'ny lalàna izany akory. Dia tandremo izany milahatra sy migrevy eo fa tonga dia midoboka izay. Kanefa anie dia io rangahy io mihitsy no nitarika olona hilahatra sy handika lalàna t@ 4 janoary 2002 e! Ka nony injay izy mahazo toerana dia mamemetra ny hafa tsy hikofoka. Mahagaga ihany!!!
Raha ny eritreritro manokana aloha dia aleo hilamina dia misesy fa ampy izay ny korotana sy ny tabataba. Ny vahoaka foana mantsy no atao tohatra fiakarana sy apiriatina sy atao takalon'aina @ zavatra toy itony lazaina foana ombieny ombieny oe mijaly ny vahoaka ka tokony hitokona sy hikomy kanefa rehefa vita avy eo ny tolona dia ao ireo mizara seza eo kosa anefa ireo miady seza fa mahatsiaro voailikilika dia ireo indray no mikomy hanakorotana avy eo dia toy izay hatrany ilay fiainana politika eto Madagasikara nanomboka tao aorinan'ny 91.
Dia miandry izay higadonany sisa ny vahoaka e! Fa ny hita aloha hatreto dia manankarena izay tsy izy ireo mpitondra ary mitombo isa hatrany ny fananany toy ireo mpitondra nifanesy teo ihany. Ary hinoako koa fa mbola toy izany koa ireo mpitondra hifanesy eo. Ny vahoaka dia hahantra hatrany hatrany @ izay mantsy mora rebirebena sy tambatambazana.